सरकारले दिने अनुदानको जस्तापाता लिन पनि कांग्रेस कार्यकर्ता बन्नुपर्ने ! – Media News Khabar
सरकारले दिने अनुदानको जस्तापाता लिन पनि कांग्रेस कार्यकर्ता बन्नुपर्ने !
साउन ३१ सुर्खेत । सुर्खेतको चिंगाड गाउँपालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिले सरकारले अनुदानमा दिएको जस्तापातामा व्यापक अनियमिता गरेको गुनासो आएको छ ।
गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ का अध्यक्ष बुदे खत्रीले आफन्त, कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई अनुदान उपलब्ध गराएको पाइएको हो ।
गरीव, दलित र अपांगता भएकालाई उपेक्षा गरेको आरोप उनलाई लागेको छ । उनी नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव जितेर वडाध्यक्ष भएका हुन् ।
उनले जस्तापाताले घर छाएका व्यक्तिहरुले नपाउने बताउँदै त्यस्तो भएको खण्डमा उजुरी दिन सकिने बताए । ‘उहाँहरुले पालिकामा उजुरी दिन सक्नुहुन्छ । उजुरी दिएको खण्डमा जस्तापाता भएकाहरुले उक्त अनुदान पाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘खरको छाना हटाउने काम मात्रै हो । यसमा धनी र गरिब भन्ने कुरा हुँदैन । जसको खरको छानो छ उसले यो अनुदान पाउँछ ।’
Previous रबिन्द्र मिश्र र ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रक्षेपण:- मुलुक राजतन्त्र पुनस्थापनाको बाटोमा, राजाको लहर अब कसैले रोक्न सक्दैन !
Next रामकुमारी झाक्री अब उपसभामुख बन्दै